> Resource> Android> Olee ka mmekọrịta Gmail Ndi ana-akpo ka Android
Chọrọ mmekọrịta kọntaktị na Android si Gmail, ma chọta dịghị ụzọ? Ọ bụrụ na ị na-egwu gị wits na ya, ị na-nri ebe. Ebe a, isiokwu a tumadi na-agwa gị otú ị ka mmekọrịta kọntaktsị na Gmail akaụntụ ka gam akporo na ihe dị mfe na-eji Android manager - Wondershare MobileGo for Android ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Nke a njikwa-ahapụ gị mmekọrịta kọntaktsị na Gmail akaụntụ na gị Android ka Android adreesị akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na-enweghị gmail akaụntụ na ihe gam akporo ngwaọrụ, nke a Android njikwa ga-enyekwara gị mmekọrịta kọntaktsị na ya na-Android.
Olee otú mmekọrịta Gmail kọntaktị na Android
Download a Android faili na kọmputa gị mbụ. The nkuzi n'okpuru bụ banyere syncing Gmail kọntaktị gị Android ngwaọrụ a na Windows verison nke a Android manager - Wondershare MobileGo for Android.Then, na-ahapụ 'iṅomi mfe nkuzi ọnụ.
Nzọụkwụ 1. Run a Android Manager na jikọọ gị Android ekwentị na PC
Wụnye na-agba ọsọ a Android faili na gị PC. Jikọọ gị android ngwaọrụ PC site na eriri USB ma ọ bụ site Wi-Fi. Mgbe nke a Android njikwa achọpụta rụọ gị gam akporo ngwaọrụ, ị nwere ike ịlele faịlụ gị Android na mmapụta isi window.
Cheta na: Nke a Android manager - Wondershare MobileGo for Android-ahapụ gị mmekọrịta Gmail kọntaktị na multiple Android ngwaọrụ. Ego na-akwado Android ngwaọrụ iji nweta ihe Ama.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta kọntaktị site na Gmail ka Android
Ọ bụrụ na ị nwere Gmail akaụntụ na gị Android, ị nwere ike ngwa ngwa mmekọrịta kọntaktsị na ya na gị na Android adreesị akwụkwọ. Enweta "Setting"> "Accounts & mmekọrịta". Enweta Gmail na-ahọrọ "mmekọrịta Ndi ana-akpo". Mgbe ahụ, "mmekọrịta ugbu a." Nke a Android njikwa ga-amalite syncing kọntaktsị na gị Gmail gị Android.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike pịa "Ndi ana-akpo" ke depụtara n'aka ekpe n'igbe. Na ya ndekọ osisi, ị pụrụ ịhụ Gmail ìgwè. Kọntaktị niile na ị synced naanị ugbu a na-ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị a Gmail akaụntụ na gị Android, ị ka nwere ike mmekọrịta Gmail kọntaktị gị Android ekwentị. Banye na gị Gmail akaụntụ. Pịa "Gmail"> "Ndi ana-akpo". Họrọ kọntaktị na ị chọrọ ka mmekọrịta ka Android ngwaọrụ. Pịa "More". Na ya adaala menu, pịa "Export ...".
Mgbe ahụ, họrọ a vCard usoro. Pịa "Export" ịzọpụta kọntaktị na kọmputa gị.
Mgbe ahụ, na kọntaktị window nke MobileGo for Android, họrọ otu ìgwè ịzọpụta Gmail kọntaktị. Pịa "Import / Export"> "Import kọntaktị site na kọmputa." Na nri esiri-ala ndepụta, họrọ "si vCard faịlụ". Ịnyagharịa ebe ị ịzọpụta vCard faịlụ na mbubata ya.
Nke ahụ bụ nile maka nke a Android njikwa mmekọrịta kọntaktị site na Gmail ka Android. Ọzọkwa, ị na-enwe ike mmekọrịta kọntaktsị na ndị ọzọ akaụntụ, dị ka Facebook, ka Android ngwaọrụ. Gbalịa a Android njikwa na ihe mere!
Etinye Music on Samsung Galaxy S3
Otú nyefee Data si Google Nexus ka Android
Otú nyefee ọdịnaya site Samsung ka Samsung
Na-eche Free Jiri HTC mmekọrịta na Outlook, Google, Yahoo, HTC Akaụntụ, Exchange Act
Olee otú Naghachi Text Ozi si Tiwara Etiwa Samsung Devices
Olee otú Recove Photos si Sony Kaadị ebe nchekwa